Ubuntu အမေးအဖြေများ- စာမျက်နှာ4- MYSTERY ZILLION
မူလ › Linux/Unix › Ubuntu ဝင်ရောက်ရန် · အဖွဲ့ဝင်ခြင်း မင်္ဂလာပါ!
K January 2011 edited January 2011 Moderators @T.k , Thant offtopic : တစ်ရက်လောက်သွားကြရအောင်တို ့တွေ :D
အေး .. နင်ကားခစိုက် .. လိုက်မယ်.. :P kokoye February 2011 edited February 2011 Registered Users bala;82581 said:linux mint က သည်မှာရောင်းလား
Linux MintPinguy LinuxLeeenix Browser Linux (Mozilla or Chrome)Ubuntu (9.04 ~ 10.10)Ubuntu Studio EditionLinux Super Gamer (Live / Installer)SuSeFedoraCentOSBT3 / BT4and other Linux Distro, Live USB Creator, MultiBoot Creator ,,,,,, You can copy.but pls send to msg. TT[email protected] sanlinhtet February 2011 edited February 2011 Registered Users ကိုလူပျိုကြီး...နေကောင်းတယ်နော်....တစ်ခုမေးကြည့်ချင်လို့ပါကိုလူပျို ကြီး mollify ကိုသုံးဖူးလားကျွန်တော့် အဲဒါ ကို ubuntu server 10.04 မှာတင်သုံးတာ ပြဿနာတတ်နေလို့ php က ကျွန်တော့်မှာ အခြေခံပဲရှိတာ...သိပ်မသိဘူး...ကိုလူပျိုကြီးမသုံးဖူးရင်လည်း သုံးကြည့်ပေးပါလား...အဲလို function တွေကိုရော နောက်ဘယ်လိုနေရာမှာရနိုင်မလဲ ဆိုတာလေးပါသိရင်ပြောပြပေးပါကျွန်တော့် error ကတော့ unknown error ဆိုတာကြီးပဲတတ်နေတယ်..မဝေ ခွဲတတ်တာက...ကျွန်တော့် server ကလား..ဒါမှ မဟုတ် apache/php permission ကြောင့်လားဆိုတာပါပဲ....ဒါမှ မဟုတ် သူရဲ့ php permission error ကြောင့်လား မပြောတတ်တော့ဘူးကိုလူပျိုကြီး အချိန်ရမယ်ဆို ရင် စမ်းသုံးကြည့်ပေးပါလား...ကိုလူပျို ကြီးသုံးပြီးရင် ...ကျွန်တော်တို့ ထပ်ပြောကြည့်ကြမယ်....ကျေးဇူး ကမ္ဘာ ပါခင်မျာ...http://www.mollify.org မှာ ရှိပါတယ်...code ကတော့http://code.google.com/p/mollify ပါဒါနဲ့ ကို Alexander ရော ဘယ်ပြောက်နေသလဲဗျာ...ရောက်လေရာ အရပ်က အမြန်ဆက်သွယ်ပါ...ကျွန်တော် တစ်ခု ကို Alexander အတွက်ရှာထားတယ်....:P naungnaung February 2011 edited February 2011 Registered Users အစ်ကိုတို့ရေ ကျနော် အိမ်က Ubuntu မှာ ဇော်ဂျီဖောင့်တို့ unicode တို့သွင်းချင်ပါတယ်။ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာ တချက်လောက်လမ်းညွန်ပေးကြပါခင်ဗျာ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။:cool: saturngod February 2011 edited February 2011 Administrators naungnaung;83127 said:အစ်ကိုတို့ရေ ကျနော် အိမ်က Ubuntu မှာ ဇော်ဂျီဖောင့်တို့ unicode တို့သွင်းချင်ပါတယ်။ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာ တချက်လောက်လမ်းညွန်ပေးကြပါခင်ဗျာ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။:cool:
http&#58;//code.google.com/p/zawgyi-keyboard/downloads/detail?name=burma-keyboard-tk-0.1.1.tar.gz&amp;can=2&amp;q= ninja February 2011 edited February 2011 Registered Users flv, mp4 တို ့ဖွင့်ချင်ရင် plugin လိုအပ်တယ်လို့ပြပါတယ်။ အဲဒီ plugin တွေကို ဘယ်က ယူလို့ရပါသလဲ။ naungnaung February 2011 edited February 2011 Registered Users ကို saturngod ရေဘယ်လို အင်စတော လုပ်ရမှာလဲ ဆိုတာလေး တချက်လောက်လမ်းညွန်ပါအုံးကျနော်က အခုမှ စသုံးဖူးလို့ပါခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ saturngod February 2011 edited February 2011 Administrators ninja;83169 said:flv, mp4 တို ့ဖွင့်ချင်ရင် plugin လိုအပ်တယ်လို့ပြပါတယ်။ အဲဒီ plugin တွေကို ဘယ်က ယူလို့ရပါသလဲ။
you need internet connection and please install vlc.http&#58;//www.videolan.org/vlc/download-ubuntu.html saturngod February 2011 edited February 2011 Administrators naungnaung;83175 said:ကို saturngod ရေဘယ်လို အင်စတော လုပ်ရမှာလဲ ဆိုတာလေး တချက်လောက်လမ်းညွန်ပါအုံးကျနော်က အခုမှ စသုံးဖူးလို့ပါခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
download keyboard file .tar.gz and extract it.You will see burma-keyboard-tk folder. Inside the folder README file include. open and read it. It was writing detail for installation. Morris February 2011 edited February 2011 Moderators ninja;83169 said:flv, mp4 တို ့ဖွင့်ချင်ရင် plugin လိုအပ်တယ်လို့ပြပါတယ်။ အဲဒီ plugin တွေကို ဘယ်က ယူလို့ရပါသလဲ။
ဘယ် version ကိုပြောတာလဲမသိပါ။ Lucid Lynx အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ ရှာပေးထားပါတယ်။ ကျန်တဲ့ version တွေလည်း 100% မဟုတ်ပေမယ့် အတော်အတန် အသုံးပြုလို ့ရပါတယ်။  http&#58;//ygn.me/jWKdT0 (http&#58;//ygn.me/jWKdT0)http&#58;//ygn.me/9@lTG blueice085 February 2011 edited February 2011 Registered Users ကျွန်တော် Ubuntu 10.4 ကိုတင်တာ Ubuntu 10.4 is now running is low graphic mode ဆိုပြီးပေါ်နေတယ်ဗျ ။ကျွန်တော့်စက်က Nvidia graphic card သုံးထားပါတယ် ။အဲဒါကို ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဗျ ။ကျွန်တော်က အခုမှ စသုံးမလို့ပါ ။ လုံး၀မသုံးတတ်သေးလို့ပါ ။ကူညီကြပါဗျာ ။:smile: K February 2011 edited February 2011 Moderators ကျွန်တော် Ubuntu 10.4 ကိုတင်တာ Ubuntu 10.4 is now running is low graphic mode ဆိုပြီးပေါ်နေတယ်ဗျ ။
Read it bro.http&#58;//ubuntuforums.org/showthread.php?t=628790 8vilboy March 2011 edited March 2011 Registered Users ကျနော့် hard disk မှာ Ubuntu နဲ. XP တင်ထားပါတယ်။ အဲ့ဒါ Ubuntu နဲ.ပဲ boot တက်လာလို. XP နဲ. boot တက်အောင် ဘယ်လိုပြန်ပြင်ရမလဲမသိလို.ပါ။ Morris March 2011 edited March 2011 Moderators 8vilboy;83992 said:ကျနော့် hard disk မှာ Ubuntu နဲ. XP တင်ထားပါတယ်။ အဲ့ဒါ Ubuntu နဲ.ပဲ boot တက်လာလို. XP နဲ. boot တက်အောင် ဘယ်လိုပြန်ပြင်ရမလဲမသိလို.ပါ။
ဒီင်္ပိုစ်မှာရေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ။ ကျွန်တော်တုံးကလည်း ဒီလိုဖြစ်ဖူးပါတယ် :)http&#58;//www.mysteryzillion.org/forums/showthread.php/5798-GRUB-Loading-Error-15?highlight=grub Loopy April 2011 Registered Users I wanna know difference between kubuntu and ubuntu saturngod April 2011 edited April 2011 Administrators Loopy said:I wanna know difference between kubuntu and ubuntu@Loopy, kubuntu use KDE desktop and Ubuntu use Gnome Desktop. kozin April 2011 Registered Users ကျွန်တော်အခု Window764bit မှာ Virtual box နဲ့ ubuntu lucid ကိုတင်ထားပါတယ်။၁။ ubuntu ကို virtual box မှာ run တဲ့အခါမှာ resolution သေးနေပါတယ်။ 800x600 လောက်ပဲရှိမယ်ထင်ပါတယ်။ အဲဒါကို ဘယ်လိုပြင်ရမလဲခင်ဗျာ။ Desktop, firefox တို့မှာတော်တော်သေးနေတောကြည့်ရတာအဆင်မပြေလို့ပါ။၂။ Virtual Box မှာရှိတဲ့ Ubuntu နဲ့ Window 7ကို folder တစ်ခုနဲ့ share ချင်ပါတယ်။ Virtual Box မှာ share folder တွေ့ပေမယ့် ဘယ်လိုသုံးရမယ်မှန်းမသိလို့ပါ။ Guestaddition.iso ကိုထည့်ပြီးသွင်းကြည့်ပေမယ့်လည်းအဆင်မပြေပါ။ နည်းလမ်းလေးပြောပေးကြပါဦး။ဆက်မေးပါဦးမည်... K April 2011 Moderators kozin said:၁။ ubuntu ကို virtual box မှာ run တဲ့အခါမှာ resolution သေးနေပါတယ်။ 800x600 လောက်ပဲရှိမယ်ထင်ပါတယ်။ အဲဒါကို ဘယ်လိုပြင်ရမလဲခင်ဗျာ။ Desktop, firefox တို့မှာတော်တော်သေးနေတောကြည့်ရတာအဆင်မပြေလို့ပါ။
For 1st question, check @ link below.http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=691495http://ubuntuforums.org/showthread.php?p=5145028#post5145028
kozin said:၂။ Virtual Box မှာရှိတဲ့ Ubuntu နဲ့ Window 7ကို folder တစ်ခုနဲ့ share ချင်ပါတယ်။ Virtual Box မှာ share folder တွေ့ပေမယ့် ဘယ်လိုသုံးရမယ်မှန်းမသိလို့ပါ။ Guestaddition.iso ကိုထည့်ပြီးသွင်းကြည့်ပေမယ့်လည်းအဆင်မပြေပါ။ နည်းလမ်းလေးပြောပေးကြပါဦး။
For 2nd,http://forums.virtualbox.org/viewtopic.php?t=15868All you need to do is install Guest Additions. I hope i would helpful for you. K April 2011 Moderators Loopy said:I wanna know difference between kubuntu and ubuntu
The desktop environment is the main difference... and programs.For example, Ubuntu uses Synaptic. Kubuntu uses Adept.Ubuntu uses Gedit. Kubuntu uses Kate.Ubuntu uses Firefox. Kubuntu uses Konqueror.For more differences: http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=194424 kozin April 2011 edited April 2011 Registered Users နံပါတ် (၁) တော့ ubuntu ကို ကupdate လုပ်လိုက်တာမှာအဆင်ပြေသွားပါတယ်။နံပါတ် (၂) က အဆင်မပြေသေးပါဘူး အစ်ကို။ အစ်ကို K ပေးတဲ့ လင့်ခ် ကနေ သွားပြီးလုပ်ကြည့်ပါတယ်။ Guestaddition.iso ကို mount လုပ်ပြီး guest addition ကို install ထည့်ပြီးပါပြီ။ Partition D:\_ushare ကို vbox က setting က share ထဲမှာထည့်ပြီးပါပြီ "sudo mount -t vboxsf share ~/host" လို့ရိုက်တော့ protocol error လို့ပြောပါတယ်။ အစ်ကို K ပေးထားတဲ့ link အောက်ဆုံးမှာ Troubleshooting မှာ အဖြေပါပေမယ့် ဘာပြောမှန်းမသိလို့ကူညီပေးပါဦး။ JohnMajor November 2011 Registered Users ကျွန်တော် ubuntu မှာ visual effects က normal visual effect ရွေးလိုက်တော့ Nvidia graphics driver plugin ဆိုတော့ ဒေါင်းလုပ်ဆွဲဆိုတော့ ဆွဲပေးလိုက်တယ် ပြီးတော့ restart လုပ်ပေးဆိုလို့ လုပ်ပေးလိုက်တော့ ပြန်တက်လည်းလာရော command တွေအလုံးအရင်းနဲ့ ကျွန်တော်လည်း sudo apt-get update ဘာညာရိုက်လည်း ဘာမှမရဘူးဖြစ်နေတယ်ဗျာ အဲဒီနေရာကနေလည်း ကျော်ပြီး OS ထဲဝင်လို့လည်းမရတော့ဘူး ဘာလုပ်ရမလဲ​ ​ပြောကြ ကူညီကြပါဦး mo3gyi April 2012 Registered Users ကျွန်တော် ubuntu မသုံးဖူးလို့ စမ်းသုံးကြည့်ချင်နေတာ။ စာမေးပွဲတွေရှိနေတော့ windows ပစ်ပြီး တင်သုံးဖို့ မရဲသေးတာနဲ့ စောင့်နေတာ။ ဖြစ်ချင်တော့ ဒီနေ့ လျှောက်မွှေရင်း Ubuntu Desktop 12.04 LTS တင်ဖို့ရှာတော့ သူ့ official site မှာပဲ wubi တွေ့တယ်။ ကျွန်တော့်လို windows ကို မစွန့်ပစ်သေးဘဲ ubuntu စမ်းသုံးချင်တဲ့ သူတွေရှိရင် အဆင်ပြေတယ်ဗျ။ သူက wubi windows installer သုံးပြီး ubuntu ကို dual boot ပုံစံမျိုးတင်တာ။ windows က primary os အနေနဲ့ရှိနေဦးမှာပဲ။ boot တက်ရင် dual boot ပုံစံ ၂ ခုတက်ပေမယ့် ubuntu မကြိုက်လို့ပြန်ဖြုတ်ချင်ရင် windows ဘက်ကနေ ပုံမှန် program တစ်ခု ပြန်ဖြုတ်သလိုပဲ uninstall လုပ်ပေးလိုက်ယုံပဲဆိုတော့ စမ်းကြည့်ချင်တဲ့သူတွေအတွက် အသုံးဝင်မှာပါ။http://www.ubuntu.com/download/help/install-ubuntu-with-windowsဒါနဲ့ကျွန်တော်စမ်းသုံးကြည့်တော့ နည်းနည်း နှေးတယ်ဗျ။ ကျွန်တော် forum တွေလိုက်ဖတ်တာတော့ ubuntu က ပိုမြန်တယ်ပြောကြတယ်။ အခု သုံးကြည့်တာကျတော့ တစ်ခါတလေ unresponsive ဖြစ်တယ်။ တစ်ခါတလေမှဖြစ်တာဆိုပေမယ့် ဖြစ်ရင် ၁၀ စက္ကန့်လောက်ထိကြာတတ်တယ်။ ကျွန်တော် wubi နဲ့ တင်လို့နှေးတာလားမသိဘူး။ သိတဲ့သူတွေ ဖြေပေးကြပါဦး။ ubuntu ရဲ့ ကာလရှည်ပြဿနာဖြစ်တဲ့ battery စားတဲ့ ပြဿနာကို ဒီ 12.04 LTS မှာ ဖြေရှင်းပေးထားတယ်ကြားတယ်။ ဟုတ်မဟုတ်တော့ သေချာမသိဘူးဗျ။ CalmHill April 2012 Administrators mo3gyi said:ဒါနဲ့ကျွန်တော်စမ်းသုံးကြည့်တော့ နည်းနည်း နှေးတယ်ဗျ။ ကျွန်တော် forum တွေလိုက်ဖတ်တာတော့ ubuntu က ပိုမြန်တယ်ပြောကြတယ်။ အခု သုံးကြည့်တာကျတော့ တစ်ခါတလေ unresponsive ဖြစ်တယ်။ တစ်ခါတလေမှဖြစ်တာဆိုပေမယ့် ဖြစ်ရင် ၁၀ စက္ကန့်လောက်ထိကြာတတ်တယ်။ ကျွန်တော် wubi နဲ့ တင်လို့နှေးတာလားမသိဘူး။ သိတဲ့သူတွေ ဖြေပေးကြပါဦး။
The Unity Desktop has performance problem. It will be unresponsive with some graphic driver. The performance will not be much difference even you install without Wubi. koko22 April 2012 Registered Users mo3gyi said:ဒါနဲ့ကျွန်တော်စမ်းသုံးကြည့်တော့ နည်းနည်း နှေးတယ်ဗျ။ ကျွန်တော် forum တွေလိုက်ဖတ်တာတော့ ubuntu က ပိုမြန်တယ်ပြောကြတယ်။ အခု သုံးကြည့်တာကျတော့ တစ်ခါတလေ unresponsive ဖြစ်တယ်။ တစ်ခါတလေမှဖြစ်တာဆိုပေမယ့် ဖြစ်ရင် ၁၀ စက္ကန့်လောက်ထိကြာတတ်တယ်။
Why don't you try Gnome Classic mode? Search & install gnome-panel in software center. Restart and choose Classic mode at log in screen. mo3gyi April 2012 edited April 2012 Registered Users Well... I am tasting Linux mint 12. I have read some recommendation for linux mint 12 asasuitable distros for beginners who just shifted from windows. It seems great and easy to use asawindows user. Now I have tried Ubuntu 12.04 and linux mint 12 both via windows installer Wubi. Sadly, I don't have any knowledge about command lines. I even struggled to open terminal at the first time. lolI just want to ask for your advice if there is certain distros or version of distros you would like to recommend foranewcomer. CalmHill April 2012 Administrators သိပ်ကွာတယ်တော့ မဟုတ်ပါဘူး အတူတူပါပဲ တစ်ချို့ကတော့ Mint က Software တစ်ချို့ Build-In ပါလာလို့ အဆင်ပြေတယ်လို့ပြောကြတယ် ဘာမှထူးတယ်တော့မဟုတ်ပါဘူး Ubuntu မှာဆိုရင် Video Audio အတွက် codec တစ်ချို့ထပ်ထည့်ရမယ် Command နဲ့မပြင်တတ်သေးတော့ Ubuntu Tweak လို Application ထပ်ထည့် အဲဒါဆိုရင် GUI နဲ့ပြင်လို့ရတာပေါ့ အဲဒါပဲ ကျန်တာတော့ သိပ်ကွာခြားလှတယ် မဟုတ်ပါဘူး။ Software တွေထပ်ထည့်တာလည်း Ubuntu လိုမှာ သိပ်ခက်ခဲတာမဟုတ်ပါဘူး Software Center ကနေထည့်တာပါပဲ အနည်းဆုံးတော့ Installation ဘယ်လိုလုပ်တယ် စပြီးတော့ လေ့လာသလိုဖြစ်တာပေါ့။ Technically ပြောပါဆိုရင်တော့ Mint က Debian နဲ့ Ubuntu ကြားမှာဖြစ်နေတော့ တစ်ချို့ Package Update တွေမှာ Ubuntu ထက်နောက်ကျပါလိမ့်မယ်။ Linux ကိုစလေ့လာချင်လို့ စမ်းကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ Mint ကိုစမ်းသုံးမယ့်အစား Ubuntu ကိုအားပေးပါတယ် ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Ubuntu ဟာ Desktop သုံးသလိုပဲ Enterprise Network သုံးတဲ့ Server တွေလည်းရှိပါတယ် နောက်တစ်ခုက Mint သုံးလို့တော့ Ubuntu ထက်ဘာမှများများစားစား ပိုပြီးလွယ်မသွားတာတော့ သေချာပါတယ်။
mo3gyi said:Well... I am tasting Linux mint 12. I have read some recommendation for linux mint 12 asasuitable distros for beginners who just shifted from windows. It seems great and easy to use asawindows user. Now I have tried Ubuntu 12.04 and linux mint 12 both via windows installer Wubi. Sadly, I don't have any knowledge about command lines. I even struggled to open terminal at the first time. lolI just want to ask for your advice if there is certain distros or version of distros you would like to recommend foranewcomer.
THIHA.MMCP April 2012 Registered Users ကျွန်တော်လဲ တခုမေးပါမယ်.... Ubuntu ကိုတင်ပါတယ်.. LAN နဲ့ နက်ဝေါ့အဆင်ပြေပါတယ်.. ဝါယာလက် နဲ့ကျမှ ဒုက္ခရောက်တယ်.. တီပီလင့် အတွက် ဝါယာလက်အဒတ်ပတာကို ဘယ်ကနေ ရမလဲခင်ဗျ..အရင်ကတော့ တခုတွေ့ဖူးတယ် တိုက်ရိုက်ကြီးတော့ မဟုတ်ဘူးဗျ... သူက ဖန်းဝဲလ် တခုသွင်းခိုင်းတယ်.. နောက် တခုထပ်လုပ်ပေးရတယ်ဆိုပေမယ့် သိပ်နားမလည်တော့ ဘာဆက်လုပ်ရမလဲ မသိတော့ဘူး.. အဲ ကြိုးနဲ့ဆိုရင်တော့ ရတယ်.. ဘာပြသနာမှမရှိဘူး ...TP-Link WN722N နဲ့ပါ... အကယ်လို့များ အဆင်ပြေဖို့ နည်းလမ်းလေးများ ရှိခဲ့ရင်step by step ရှင်းပြပေးပါခင်ဗျာသီဟ CalmHill April 2012 Administrators Step by Step တော့ကျွန်တော်လည်း လုပ်ပြလို့မရဘူးလေ ကျွန်တော့်မှာ TP-Link WN722N မရှိပါဘူး လိုက်ကြည့်လိုက်တော့ အဲ့ဒီ့ WN722N ကအခုနောက်ဆုံးထွက်တဲ့ 12.04 အထိ Driver မရှိသေးပါဘူး အဲဒါကြောင့် သုံးမယ်ဆိုရင် ကိုယ်တိုင်ပဲ Driver ကို build လုပ်ရပါလိမ့်မယ် အောက်မှာပြထားတဲ့ လင့်မှာပြထားသလို စမ်းကြည့်ပါ သူလည်းရေးထားတာ နည်းနည်းကြာပြီဆိုတော့ အဲ့ဒီ့မှာပြထားတဲ့ Code တွေလည်း Version အသစ်ထွက်လောက်ပါပြီ။ build လုပ်နေကျမဟုတ်ရင်တော့ စမ်းကြည့်ဖို့နည်းနည်းခက်ပါလိမ့်မယ်။ အခုအချိန်အထိ Driver မရှိတဲ့ပြဿနာတွေ Linux မှာရှိနေတုံးပဲ။ မရရင်တော့ အလွယ်ဆုံးနည်းက Driver လွယ်တဲ့ ကဒ်တစ်ခုသာ ပြောင်းသုံးလိုက်တာ အချိန်ကုန်နဲ့လူပင်ပန်းသက်သာတယ် :Phttp://dwiel.net/blog/tp-link-tl-wn722n-on-ubuntu-10-04/http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1895776 mo3gyi May 2012 Registered Users ကယ်ကြပါဦးဗျာ... ကျွန်တော့် ubuntu မှာ မြန်မာဖောင့်တင်တာ google chrome နဲ့သုံးလို့ အဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေတယ်။ screenshot သာ ကြည့်ကြပါတော့။ firefox နဲ့ကျ ရတယ်။ အကြံလေးဘာလေးပေးကြပါဦးဗျ။ CalmHill May 2012 edited May 2012 Administrators Firefox ပေါ်မှာ MZ ဘယ်လိုပေါ်သလဲရယ် Chrome ပေါ်မှာ အပေါ်မှာ အပေါ်က Website ဘယ်လိုပေါ်သလဲ ထပ်ပြပေးပါ။
mo3gyi said:ကယ်ကြပါဦးဗျာ... ကျွန်တော့် ubuntu မှာ မြန်မာဖောင့်တင်တာ google chrome နဲ့သုံးလို့ အဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေတယ်။ screenshot သာ ကြည့်ကြပါတော့။ firefox နဲ့ကျ ရတယ်။ အကြံလေးဘာလေးပေးကြပါဦးဗျ။ mo3gyi May 2012 Registered Users ဒါက အပေါ်က website ၂ ခု firefox ပေါ်မှာပေါ်တာ K May 2012 Moderators mo3gyi said:ကယ်ကြပါဦးဗျာ... ကျွန်တော့် ubuntu မှာ မြန်မာဖောင့်တင်တာ google chrome နဲ့သုံးလို့ အဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေတယ်။ screenshot သာ ကြည့်ကြပါတော့။ firefox နဲ့ကျ ရတယ်။ အကြံလေးဘာလေးပေးကြပါဦးဗျ။
Yes, Myanmar Fonts doesn't work in Google Chrome in Ubuntu, cos Chrome didn't support Myanmar Fonts. Not only Unicode, but also Zawgyi, too.You can only count on Firefox, while you are using Ubuntu. [ It's happened to me, too. T_T] mo3gyi May 2012 Registered Users နောက်တစ်ခုမေးချင်တာကတော့ မိုက်ကရိုဖုန်းဗျ။ ကျွန်တော့်ဒီလက်တော့၊ ဒီမိုက်နဲ့ပဲ ဝင်းဒိုးမှာအဆင်ပြေပေမယ့် အူဘန်းတုရောက်တော့ စကားပြောရတာအဆင်မပြေတော့ဘူး။ အသံကျယ်လိုက်ရင် အသံက အရမ်းကို အူလာပြီး အသံတိုးလိုက်ရင်တော့လည်း ဘာသံမှ မကြားရတော့ပြန်ဘူး။ ကူညီကြပါဦး။ K May 2012 Moderators mo3gyi said:နောက်တစ်ခုမေးချင်တာကတော့ မိုက်ကရိုဖုန်းဗျ။ ကျွန်တော့်ဒီလက်တော့၊ ဒီမိုက်နဲ့ပဲ ဝင်းဒိုးမှာအဆင်ပြေပေမယ့် အူဘန်းတုရောက်တော့ စကားပြောရတာအဆင်မပြေတော့ဘူး။ အသံကျယ်လိုက်ရင် အသံက အရမ်းကို အူလာပြီး အသံတိုးလိုက်ရင်တော့လည်း ဘာသံမှ မကြားရတော့ပြန်ဘူး။ ကူညီကြပါဦး။
Microphone က plug-and-play လား? Windows မှာ Driver သွင်းရတယ်ဆိုရင်တော့ Ubuntu မှာလဲ Driver သွင်းဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။ မိုက်ကရိုဖုန်းပိုင်းနဲ့ ပတ်သတ်ပြီးတော့ တစ်ခါမှ မလုပ်ဖူးတော့ သေချာမပြောပြတတ်ဘူး။ အသံနဲ့ ပတ်သတ်တာဆိုရင်တော့ Restricted Extras တွေ နဲ့ဆိုင်မယ်လို့တော့ ထင်တယ်။ အတတ်မပြောရဲဘူး။ https://www.facebook.com/groups/ubuntu4mm/အဲ့ဒီ Group မှာ မေးကြည့်ရင်တော့ အဖြေပြန်ရမယ်ထင်တာပဲ. ^^ mo3gyi June 2012 Registered Users Ubuntu မှာ Wine ဒါမှမဟုတ် virtual windows တစ်ခုခုနဲ့ Windows application တွေသုံးတဲ့အခါ virus ပြဿနာရှိလာနိုင်ပါသလား။ နောက်တစ်ခုသိချင်တာက နှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်မှာ ကျွန်တော် မြန်မာနိုင်ငံကို ပြန်ရပါမယ်။ အဲဒီမှာ EVDO internet နဲ့သာ သုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် Ubuntu ဆက်သုံးဖို့အဆင်ပြေနိုင်ပါ့မလား။ ကွန်နက်ရှင်က အရမ်းနှေးတော့ Ubuntu နဲ့သုံးလို့ အဆင်မပြေမှာစိုးလို့ပါ။ တကယ်လို့ Ubuntu သုံးဖို့အဆင်မပြေဘူးဆိုရင်တော့ ခုကတည်းက Windows ပဲပြန်သုံးရင််ကောင်းလားလို့။ PhyoMyanmar June 2012 Registered Users အဓိကက Update လုပ်တာတို့ Software install လုပ်တာတို့တော့ ကွန်မကောင်းရင် တော်တော်စိတ်ပျက်ပါလိမ့်မယ် ( ကိုယ်တွေ့ ) ကျွန်တော်ကတော့ Ubuntu သုံးရတာအဆင်မပြေပါဘူး အိမ်မှာ Wimax 128 လေးတပ်ထားပါတယ် Download Speed က 15KB၀န်းကျင်ပဲရတယ် :(လိုင်းမကောင်းတော့ ဥပမာ NetBean လိုဟာမျိုးတို့ Blender တို့ နောက် Software အကြီးတွေကို မဆွဲနိုင်ပဲဖြစ်နေတယ် 100MB အထက်ရှိတာကိုးနောက်ပြီး တစ်ခုခုသွင်းမယ်ဆို sudo apt-get update တစ်ခါလုပ်ရင် တစ်နာရီကျော်ကြာတယ် ပြီးအောင်ထိုင်စောင့်ရတာupdate & upgrade ဆိုရင်တော့ အေးရော :D :D g00gle June 2012 Registered Users ကျွန်တော့်ကတော့ မြန်မာပြည်ကလူတွေကို Ubuntu ပိုသုံးစေချင်ပါတယ်။ ဗိုင်းရပ်ကြောင့်ပါ။ ကျွန်တော့်တုန်းက အင်တာနက်ဆိုင်မှာ သွားသုံးတိုင်း ဗိုင်းရပ်က အမြဲထိပါတယ်။ Ubuntu သုံးရင် ဗိုင်းရပ် အန္တရာယ် နည်းသွားမလား။ နောက်တစ်ခုက Ubuntu software download မှာ အရေးကြီးတာက sources ပါပဲ။ Sources update လုပ်ပြီးသွားရင် လိုအပ်တဲ့ software package download links ​တွေကို offline ​ခေါ်လို့ ရပါတယ်။ http://www.myanmarfamily.org/forum/showthread.php?t=25952 မှာတော့ ကျွန်တော် ရေးထားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ feedback က ပြန်မလာတော့ လူတိုင်း အဆင်ပြေ၊ မပြေ ကျွန်တော် မသိပါဘူး။ ကျွန်တော်ကတော့ အဲဒီနည်းပဲ သုံးပါတယ်။ စမ်းသပ်ရဲရင်တော့ စမ်းသပ်စေချင်ပါတယ်။ လူပိန်းနည်း ပါ။ (အလွယ်ပဲ လိုက်ထားတာပါ) ဆရာကျကျ လုပ်ချင်ရင်တော့ http://www.tuxgarage.com/2011/07/offline-upgrade-install-packages-ubuntu.html မှာ သွားကြည့်လို့ ရပါတယ်။​ကိုယ်ပိုင် အင်တာနက် သုံးနိုင်တဲ့သူတွေကြတော့ apt-get တို့ software center, update manager အစား synaptic package manager ကို သုံးစေချင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အင်တာနက် မကောင်းတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက လူတွေပါ။ Ubuntu software update/install လုပ်တဲ့အခါ ဖိုင်တွေကို /var/cache/apt/archive စတဲ့ နေရာမှာ သွားသိမ်းပါတယ်။ တကယ်လို့ bleachbit နဲ့ clean မလုပ်ဘူး၊ terminal သို့ file manager က မဖျက်ရင် packages ​တွေက /var/cache/apt/archive မှာပဲ ကျန်ပြီး နောက်ကို synaptic package manger, terminal ကနေ offline သွင်းလို့ ရပါတယ် (note:software center က​တော့ 11.10 ​ကစပြီး အင်တာနက် မရှိရင် install ကို ပေးမလုပ်ပါဘူး)sudo apt-get update က sources ကိုပဲ update လုပ်တာပါ။ တစ်နာရီကျော်ဆိုတော့ သိပ်မဆိုးဘူး ပြောလို့ ရမယ်။ Sources update လုပ်ဖို့ပဲ အဓိက လိုတာပါ။ အင်တာနက် မကောင်းရင် synaptic နဲ့ install မလုပ်ပဲ package ပဲ ဒေါင်းလုပ်ချထားလို့ ရပါတယ်။ နောက် packages အားလုံးစုံမှ ပြန်သွင်းရုံပါ။ ဒါမှမဟုတ် synaptic နဲ့ပဲ Script ထုတ်ပြီး downthemall နဲ့ သုံးလို့ ရပါတယ်။ http://www.tuxgarage.com/2011/07/offline-package-installation-synaptic.html(note: install လုပ်တဲ့အခါ အဲဒီ လင့်ကအတိုင်း မလုပ်ပါနဲ့) ဖိုင်တစ်ဖိုင်ဆီကို download လုပ်နိုင်သလို၊ အကုန်လုံးကိုလဲ ဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ နောက် အဲဒီဖိုင်တွေကို backup သိမ်းပြီး သူများကိုလဲ ပြန်မျှလို့ ရပါတယ်။ Offline သွင်းရာမှာ တစ်ခု သတိထားရမှာက dependencies ပါ။ စက်တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု i386/amd64 ကွာခြားတာ၊ သွင်းထားတဲ့ ဆော့ဝဲကွာတာကြောင့် စက်ထဲမှာ ရှိတဲ့ dependencies မတူပါဘူး။ ဒါကြောင့် dpkg -i နဲ့ သွင်းရင် error တက်ဖို့ များပါတယ်။ (dpkg ကတော့ software sources updated ဖြစ်ဖို့ မလိုပါဘူး) ဖြေရှင်းနည်းက synaptic ကနေ broken package fix လုပ်တာ။ (terminal ကလဲ လုပ်လို့ ရပါတယ်) သို့မဟုတ် လိုတဲ့ dependencies ကို သွင်းလိုက်တာပါ။ ဒါပေမဲ့ break ကို လုံးဝ မဖြစ်စေချင်လို့ Sources ကိုပဲ update လုပ်စေချင်ပါတယ်။ source update ဖြစ်နေရင် sudo apt-get install, sudo apt-get upgrade, synaptic နဲ့ ရိုးရိုးဆော့ဝဲသွင်းသလို အကုန်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ တခါတလေတော့ ဖိုင်အနည်းငယ် ကျန်ကောင်းကျန်ပါမယ်။ ၂-၃ လောက်ပါ။ manual ရှာသွင်းရင် အဆင်ပြေပါတယ်။ Deb files ​တွေကို offline ခဏခဏ သွင်းတတ်ရင်တော့ GDebi package installer ကို သွင်းထားသင့်ပါတယ်။ သူက source update ဖြစ်နေရင် မရှိတဲ့ dependencies ကို အင်တာနက်က ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် offline ​ပေမဲ့ ဘာဖိုင်ဒေါင်းရမလဲ အလွယ်တကူ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ နောက် စက်ထဲ လိုအပ်တဲ့ ဆော့ဝဲတွေ အကုန်သွင်းထားရင် မြန်မာနိုင်ငံပဲ သွားသွား၊ အင်တာနက် မရှိတဲ့နေရာပဲ သွားသွား အခက်အခဲ မရှိလောက်ဘူး ထင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ Ubuntu တစ်ခုထဲတော့ မသုံးစေချင်ပါ။ Dual-boot ​လောက်တော့ သုံးပါ။ Wine နဲ့ windows virus ​တွေ အလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဝင်းဒိုးလိုတော့ autorun ဖြစ်ချင်မှ ဖြစ်မှာပါ။ wine browser မသုံးရင်၊ ကိုယ်တိုင် ဗိုင်းရပ်ဖိုင်တွေကို ဝိုင်နဲ့ လိုက်မဖွင့်ရင်တော့ ပြဿနာ မရှိပါဘူး။ K June 2012 Moderators g00gle said:ကျွန်တော့်ကတော့ မြန်မာပြည်ကလူတွေကို Ubuntu ပိုသုံးစေချင်ပါတယ်။ ဗိုင်းရပ်ကြောင့်ပါ။ ကျွန်တော့်တုန်းက အင်တာနက်ဆိုင်မှာ သွားသုံးတိုင်း ဗိုင်းရပ်က အမြဲထိပါတယ်။ Ubuntu သုံးရင် ဗိုင်းရပ် အန္တရာယ် နည်းသွားမလား။ သာမန် EndUser တွေအနေနဲ့ကတော့ ဗိုင်းရပ်စ်မကိုက်လို့ သုံးတယ်ဆိုတာမျိုး မရှိလောက်ဘူးလို့တော့ ကျွန်တော်ထင်တယ်။ အဓိက Virus သုံးမရဘူးဆိုတာထက် Executable Files တွေကို root access မရှိပဲ run မရတာကြောင့်လို့ပဲ ပြောရင်ပိုအဆင်ပြေမယ်ထင်တယ်။ ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင်လည်း ဟိုးအရင် 8.10, 9.04 လောက်ကတည်းက UI ကိုကြိုက်လို့၊ Compiz တွေကို ကြိုက်လို့၊ ဒါကြောင့် သုံးဖြစ်လာတာပါ။ Ubuntu ကို စသုံးချင်တဲ့ စိတ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့ အဲ့ဒါတွေက အဓိကပဲလို့ ကျွန်တော်ထင်တယ်။ အခုနောက်ပိုင်းတော့ ပြည်တွင်း developer အများစု Ubuntu ကိုသုံးလာတာတွေ့ရပါတယ်။ တိုးတက်လာတယ်ပြောရမှာပေါ့။
g00gle said:နောက်တစ်ခုက Ubuntu software download မှာ အရေးကြီးတာက sources ပါပဲ။ Sources update လုပ်ပြီးသွားရင် လိုအပ်တဲ့ software package download links ​တွေကို offline ​ခေါ်လို့ ရပါတယ်။ http://www.myanmarfamily.org/forum/showthread.php?t=25952 မှာတော့ ကျွန်တော် ရေးထားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ feedback က ပြန်မလာတော့ လူတိုင်း အဆင်ပြေ၊ မပြေ ကျွန်တော် မသိပါဘူး။ ကျွန်တော်ကတော့ အဲဒီနည်းပဲ သုံးပါတယ်။ စမ်းသပ်ရဲရင်တော့ စမ်းသပ်စေချင်ပါတယ်။ လူပိန်းနည်း ပါ။ (အလွယ်ပဲ လိုက်ထားတာပါ) ဆရာကျကျ လုပ်ချင်ရင်တော့ http://www.tuxgarage.com/2011/07/offline-upgrade-install-packages-ubuntu.html မှာ သွားကြည့်လို့ ရပါတယ်။
myanmarfamily မှာ ကျွန်တော် register မလုပ်ထားတဲ့ ဝင်ကြည့်မရပါ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံအတွက် လွန်ခဲ့တဲ့ သုံးနှစ်လောက်က Offline Packages တွေက အလွန်အသုံးကျပေမယ့် အခုအချိန်မှာတော့ On-line update/upgrade install တွေက ပိုအဆင်ပြေပါတယ်။ Ubuntu ရဲ့ package အများစုက Open Source ဖြစ်တဲ့အတွက် အများစုက အချိန်နဲ့အမျှ ပြင်နေကြတာပါ။ ဥပမာပြောရရင် 12.10 'Quantal Quetzal' တောင် release မလုပ်သေးဘူး။ သူ့အတွက် packages fix တွေက ready ဖြစ်နေပြီး LTS တွေမှာသုံးဖို့အတွက်ပါရေးထားတဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ Source list ကို update လုပ်ပြီး install လုပ်ဖို့လိုနေလိမ့်မယ်။ Source list မှာ Offline ထည့်ရင် နောက် update တွေရောက်ရင် source list တွေ သွားပြန်ပြင်နေရလိမ့်မယ်။​ g00gle said:ကိုယ်ပိုင် အင်တာနက် သုံးနိုင်တဲ့သူတွေကြတော့ apt-get တို့ software center, update manager အစား synaptic package manager ကို သုံးစေချင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အင်တာနက် မကောင်းတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက လူတွေပါ။ Ubuntu software update/install လုပ်တဲ့အခါ ဖိုင်တွေကို /var/cache/apt/archive စတဲ့ နေရာမှာ သွားသိမ်းပါတယ်။ တကယ်လို့ bleachbit နဲ့ clean မလုပ်ဘူး၊ terminal သို့ file manager က မဖျက်ရင် packages ​တွေက /var/cache/apt/archive မှာပဲ ကျန်ပြီး နောက်ကို synaptic package manger, terminal ကနေ offline သွင်းလို့ ရပါတယ် (note:software center က​တော့ 11.10 ​ကစပြီး အင်တာနက် မရှိရင် install ကို ပေးမလုပ်ပါဘူး)
ကျွန်တော်ကတော့ Terminal ကနေ apt-get update ကို ပိုကြိုက်တယ်။ SPM က ဘာပိုကောင်းသလဲဆိုတော့ command တွေမသိလည်း သုံးရလွယ်တယ်။ ကိုယ်နှစ်သက်ရာ package ကိုရွေးပြီး install လုပ်နိုင်တယ်။​ g00gle said:နောက် စက်ထဲ လိုအပ်တဲ့ ဆော့ဝဲတွေ အကုန်သွင်းထားရင် မြန်မာနိုင်ငံပဲ သွားသွား၊ အင်တာနက် မရှိတဲ့နေရာပဲ သွားသွား အခက်အခဲ မရှိလောက်ဘူး ထင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ Ubuntu တစ်ခုထဲတော့ မသုံးစေချင်ပါ။ Dual-boot ​လောက်တော့ သုံးပါ။ Wine နဲ့ windows virus ​တွေ အလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဝင်းဒိုးလိုတော့ autorun ဖြစ်ချင်မှ ဖြစ်မှာပါ။ wine browser မသုံးရင်၊ ကိုယ်တိုင် ဗိုင်းရပ်ဖိုင်တွေကို ဝိုင်နဲ့ လိုက်မဖွင့်ရင်တော့ ပြဿနာ မရှိပါဘူး။ Only Ubuntu သုံးလို့ ဘာပြဿနာမှ မရှိဘူးထင်တာပဲ။ အစ်ကို့ကို လိုက်ပြီး oppose လုပ်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။ Photoshop သုံးစရာမလိုတဲ့သူ၊ Game ဆော့တာကို မကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက် Ubuntu တစ်ခုထဲနဲ့လုံလောက်တယ်ထင်တယ်။ Windows လိုမျိုး XP, Vista,7တစ်ခု သွင်း/ဖျက် နေစရာမလိုဘူး။ Upgrade ကိုအေးအေးဆေးဆေးလုပ်လို့ရတယ်။ သာမန် photo editing တွေအတွက်လည်း Gimp နဲ့အေးအေးဆေးဆေးသုံးလို့ရတယ်။ IDM လိုမျိုးတွေအတွက်လည်း wget နဲ့အေးအေးဆေးဆေးအသုံးပြုလို့ရတယ်။ ပျက်သွားရင်လည်း resume လုပ်ရတာ IDM ထက်တောင်လွယ်သေးတယ်။ Dual Boot တင်ထားရင်မှ Windows ကနေ Ubuntu Partition မှားသွားဖျက်မိရင် boot ပြန်ရေးနေရသေး။ :D( ကိုယ်တွေ့လေးတွေမို့ပါ ) :P CalmHill June 2012 edited June 2012 Administrators မြန်မာနိုင်ငံမှာ အရေးကြီးတာက ကွန်ပျူတာဆိုတာ ပရိုဂရမ်ရေးတဲ့ပစ္စည်း ဂိမ်းကစားတဲ့ပစ္စည်း လူအနည်းစုပဲသုံးတဲ့ ပစ္စည်းအဖြစ်ကနေ အလုပ်လုပ်ရင်သုံးတဲ့ပစ္စည်း လူအများစုနေ့စဉ်သုံး ပစ္စည်းဖြစ်ဖို့လိုတာ Windows or Mac or Linux ဘာသုံးသုံး အရေးမကြီးပါဘူး လတ်တလော အခြေအနေကတော့ အရင်ကတော့ Asus Eee PC လေးတွေကို Linux လေးနဲ့ရောင်းတယ် နောက်တော့ Windows တွေပြောင်းရောင်းတာပါ Dell လည်း Ubuntu နဲ့ရောင်းဖူးတယ် နောက်ဆုံးမရောင်းရတော့ မထုတ်တော့ဘူး အခုအချိန်မှာ အိမ်သုံးအဖြစ် Linux သုံးဖို့ရောင်းတာ Android Tablet ကလွဲရင် မရှိသလောက်ပဲ Enduser ဆိုတာက ထည့်ပေးလိုက်တာ သုံးကြတာ အဲဒီတော့ လက်ရှိအခြေအနေအရ Linux က အိမ်သုံးကွန်ပျူတာမှာ သိပ်အများကြီးရှိမလာနိုင်သေးပါဘူး ဘယ်သူတွေသုံးလဲဆို ကိုယ့်လိုဆပ်ဆပ်ဆော့ဆော့ လူတွေပဲသုံးကြတာပဲဟာ။ :P g00gle June 2012 Registered Users ကျေးဇူးပါ။ ဆွေးနွေးပေးတဲ့ အတွက်။ source update က မစဉ်းစားမိလိုက်တာ အမှန်ပဲ။ ဒါပေမဲ့ အမြဲ ပြဿနာ မတတ်နိုင်ဘူး ထင်တယ်။ file မရှိလဲ ဖိုင်ရဲ့ လိပ်စာသိသွားပြီ။ ဥပမာ - http://archive.ubuntu.com/.../aaa/aaa_00001.deb ဆိုပါစို့။ update ဖြစ်လဲ http://archive.ubuntu.com/.../aaa/aaa_00002.deb ပဲ ဖြစ်ပါမယ်။ ဒါဆို http://archive.ubuntu.com/.../aaa/... ကနေ ဒေါင်းလို့ ရနိုင်ပါတယ်။ စဉ်းစားမိတာပါ။ ဘယ်လို ဖြစ်မလဲ လုံးဝ offline ထားပြီး တလလောက် စမ်းကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်။ register မလုပ်ချင်ရင် http://www.dinkypage.com/g00gleubuntuoffline မှာ သွားဖတ်လို့ ရပါတယ်။ ယူနီကုတ်တော့ ပြောင်းရမှာ ပျင်းတာနဲ့ မလုပ်ပေးလိုက်တော့ဘူး။ g00gle June 2012 edited June 2012 Registered Users "Source list မှာ Offline ထည့်ရင် နောက် update တွေရောက်ရင် source list တွေ သွားပြန်ပြင်နေရလိမ့်မယ်။"၂ ခု ငြိမှာကို ပြောတာလား မသိဘူး။ အဲဒါမျိုးတော့ မဖြစ်ပါဘူး။ You can keep both. «1234»	Sign In or Register to comment. Powered by Vanilla